शिक्षक–विद्यार्थीमा कोरोना देखिएपछि सल्यानका दुई विद्यालय बन्द- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
माघ ९, २०७७ विप्लव महर्जन
सल्यान — शिक्षक र विद्यार्थीमा कोरोना पाजेटिभ देखिएपछि बन्गाड कुपिन्डे नगरपालिकाका दुई विद्यालय शुक्रबारदेखि एक साताका लागि बन्द भएका छन् । प्रभाकर मावि दवस्थल र गंगा प्रावि,अम्राका विद्यालय बन्द भएका हुन् ।
केही दिनअघि ४६ जनाको स्वाव संकलन गरिएकोमा देवस्थलको प्रभाकर माविका शिक्षक र विद्यार्थी गरी १० जना र गंगा प्राविका तीन शिक्षकमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको हो । विद्यालयका सबै शिक्षक र विद्यार्थी कोरोनाको उच्च जोखिममा पर्ने देखिएपछि विद्यालय बन्द गरिएको प्रभाकर माबिका प्रधानाध्यापक शिखर यरीले बताए ।
विद्यालयका अधिकांश विद्यार्थीलाई कोरोना हुनसक्ने सम्भावना देखिएपछि थप विद्यार्थीहरुको पीसीआर परीक्षण गर्ने तयारी गरिएको उनले जानकारी गराए । कक्षा १ देखि १२ सम्म सञ्चालित विद्यालयमा झन्ठै ६ सय विद्यार्थी रहेकाले कसैलाई लक्षण देखिएमा तत्काल सम्पर्क राख्न उनले अभिभावकलाई आग्रह गरेका छन् ।
शिक्षक र विद्यार्थीमा कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि बालबालिकाको पठनपाठन पूर्ण रुपमा प्रभावित भएको र सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ नआउँदासम्म विद्यालय सञ्चालन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । ‘नगरपालिकाले विद्यालयमा आइसोलेसन बनाएको थियो । निर्मलीकरणको काममा लापरबाही गरेकाले पनि विद्यार्थी र शिक्षकमा कोरोना देखिएको हुनसक्छ’ उनले भने ।
बन्गाड कुपिन्डे नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक बासुदेव पोखरेलले कोरोना देखिएकालाई होम आइसोलेसनमा बस्न र संक्रमित परिवारका अभिभावकले मास्क प्रयोग अनिवार्य गर्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रकाशित : माघ ९, २०७७ १८:००
माघ ९, २०७७ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निरंकुश कदमलाई कसैले प्रोत्साहन गरे शान्ति प्रक्रिया ‘डिरेल’ हुनसक्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दाहाल–नेपाल समूहले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै दाहालले ओलीको कदमलाई कसैले प्रोत्साहन गरेमा शान्ति प्रक्रिया ‘डिरेल’ हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । ‘यो देशमा फेरि हिंसा होस्, फेरि युद्ध होस्, फेरि अराजकता होस् भन्ने कसैले चाहेको छैन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतका सम्मानित न्यायाधीशहरु कोही पनि फेरि यो देशमा हिंसा, द्वन्द्व, अराजकता चाहनु हुन्छ भनेर म कल्पना पनि गर्न चाहन्‍न,’ दाहालले भने, ‘केपीको कदमलाई सदर गर्ने काम भयो भने नेपालको शान्ति प्रक्रिया ‘डिरेल' हुन्छ कि भन्ने ठूलो भन्ने चिन्ता छ, कसैले पनि देश बर्बाद हुने बाटोमा भूमिका नखेलौं । ठूलो मूल्य चुकाएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र शान्ति प्राप्त भएको हो ।'
उनले आफ्नो पार्टीले समृद्ध नेपाल बनाइछाड्ने दाबी गरे । पार्टी एकतापछि पनि ओली जनयुद्धका सहिदहरुको सम्मान गर्ने कार्यक्रममा कहिल्यै सहभागी नभएको कुरा आफूले नोट गरेको दाहालले बताए । उनले भने, ‘जनयुद्ध भनेपछि एक शब्द सुन्न नचाहने हुनुहुन्थ्यो । शान्ति सम्झौता भएपछि त अलिकति सुध्रिनु भयो कि भनेको एकतापछि पनि जनयुद्धका सहिदलाई सम्मान गर्ने एउटा कार्यक्रममा जानु भएन । अरु नेताहरु जानु भयो । केपी कहिल्यै जानु भएन । मैले त्यसलाई खुब नोट गरेको छु ।’ तर, पार्टी विभाजनले आफू अल्पमतमा परेपछि जनयुद्धका घाइते अपाङ्गलाई हेर्नुपर्दैन भनेर ओलीले उल्टै आफूमाथि प्रश्न उठाएको पनि दाहालले बताए ।
‘जनयुद्धका घाइते अपाङ्गहरु माइतीघरमा अनशन बस्दा, खुमलटार गएर अनेक गरेर ऋण, सापट खोजेर मैले बेलाबेला राहत दिने । सरकारलाई पटक-पटक यी घाइते, अपांगको उपचार गर्नुपर्‍यो । यो सरकारले त खाईपाई आएको सुविधा पनि काटेछ,’ दाहालले भने, ‘जनयुद्धका घाइते अपाङ्गहरु माइतीघरमा अनशन बस्दा गृह प्रशासन पनि केपीले जे भन्यो त्यही मान्ने छ । मैले धेरै पटकभन्दा कहींकतै टेडपुच्छर लागेन । उल्टो मासिक भत्ता खोसियो । अहिले पार्टी विभाजनमा ओली अल्पमतमा परेपछि म कहिलेकाहीं सुन्छु, ती घाइते अपाङ्गलाई हेर्नु पर्दैन प्रचण्डले भन्ने तीनै केपीले ? फट्याइँ गर्न कति सकेको ? जालझेल गर्न पनि कस्तो दिमाग हो ?’
ओलीले अहिले आएर कालीबहादुर खाम खोई भन्नु लाजमर्दो कुरा भएको दाहालको भनाइ छ । ‘अहिले केपीले कालीबहादुर खाम खोई अरे ? ती कालीबहादुर खाम आफैंले केही गरेको त हैन । उनको मुद्दा ठीक ढंगले हल होस् भनेर १०/११ वर्षदेखि म लागेको छु । उनलाई गाह्रो साह्रो परेको मैले हेर्न लगातार बल गरेको छु । अहिले त कालीबहादुर तपाईंलाई प्रचण्डले हेर्दैनन् केपीले भन्नु लाजमर्दो अरु के हुन्छ ?,’ उनले थपे, ‘प्रचण्डले जनमुक्ति सेना नहेर्ने रे केपीले...लाजै । त्यसैले जनयुद्धका कमाण्डर, साथीहरु ओलीको कुरामा गम्भीर नहुनुहोला । कमरेडहरु तपाईंहरुको योगदानको इतिहासमा स्वर्णीम अक्षरले नाम लेख्ने काम भएको छ । त्यसलाई कसैले कालो नपोतौं ।’
जनताले लामो संघर्षबाट बनाएको संविधान आईसीयूमा हुँदा ओली हाँस्दै हिँडेको दाहालको आरोप छ । ‘हाम्रो नेपालीको संस्कार, विवाह हुँदा नाचगान रमाइलो गर्दै गइन्छ...तर हाम्रो केपीजी आन्दोलन भएपछि रुन थाल्नु भयो । गणतन्त्रको आन्दोलन हुनु हुँदैन भनेर नोट अफ डिसेन्ट लेख्न लगाउने मान्छे हुनुहुँदोरहेछ । जब घरमा कोही मर्छ । परिवार, गाउँ शोकमग्न हुन्छ । सबैले एकअर्कालाई ढाडस दिन्छन् । केपीको बानी त्यो बेला हाँस्ने रै'छ,’ दाहालले भने, ‘अहिले संविधान आईसीयूमा छ । उहाँ हाँस्दै हिँड्नु भएको छ, हँसाउँदै हिँड्नु भएको छ । हामी संवेदनशील भएका छौं, राष्ट्र के हुने हो, जनताको भविष्य के हुने हो यो उपलब्धि के हुने हो भनेर । तर केपी ओली उल्टो खोपडीको मान्छे नेपालमा कसरी...।’
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले केपी ओलीसँग नेकपा नझुक्ने बताएका छन् । नेता नेपालले ओली ‌कम्युनिस्ट पार्टी सदस्य बन्न योग्य नरहेको र असंवैधानिक तबरले कदम चालेकाले उनीहरुसँग मिलेर जाने अवस्था नरहेको प्रस्ट्याएका हुन् । 'एउटा कुरा कसैले भ्रममा नराख्नु होस् । फेरि केपी ओलीसँग यो नेकपाले झुक्ने कुनै काम गर्ने छैन । अब फेरि सँगसँगै जाने स्थिति बन्ला भनेर कसैले भ्रम नपाले हुन्छ,' उनले भने ।
अध्यक्ष नेपालले ओलीले ५० वर्षसम्म दु:ख मात्रै दिएको बताए । ‘केपी ओलीले ५० वर्षसम्म हैरान पारे, दु:खमात्रै दिए । मैले जहिले थम्थमाए । मलाई दु:ख मात्रै दिए । जहिले हुर्मत लिने मात्रै काम गरे । पार्टी एकता गरेपछि केपी ओली सुध्रिन्छन् कि भन्ने सोच्यौं तर सुध्रिएनन्,’ नेपालले भने ।
वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले घुँडा नटेकेसम्म सडक संघर्ष जारी रहने बताएका छन् । ‘ओलीको कदम प्रतिगमन हो । तर केपी ओलीले राजनीतिक कदम हो भन्दै हिँडेका छन् । संविधानभन्दा बाहिर गएर कसैले कदम चाल्न सक्छ ? यही संविधानअन्तर्गत बनेका प्रधानमन्त्रीहरुले संविधान बाहिर गएर कदम चाल्ने हक छैन । यो प्रतिगामी कदम हो । त्यसको विरुद्ध हामी सडकमा हुनेछौं । केपी ओलीले ओलीले घुँडा नटेकेसम्म हामी अगाडि बढ्छौं,’ खनालले भने ।
प्रकाशित : माघ ९, २०७७ १७:४८